Cimilada Isbaanishka: astaamaha, noocyada iyo heerkulka | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 03/06/2021 10:59 | Cimilada
El cimilada Isbaanishka waxaa si wada jir ah loogu yaqaan cimilada badda dhexe. Waa jawi caan ah oo caan ku ah astaamaheeda sida saacadaha badan ee qoraxda, jiilaalka fudud iyo xagaaga oo roob yar. Si kastaba ha noqotee, maahan cimilada kaliya ee Isbaanishka.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato cimilada Spain iyo astaamaheeda.
2 Cimilada Isbaanishka: noocyada
2.1 Cimilada Mediterranean
2.2 Cimilada badweynta
2.4 Cimilada Isbaanishka: cimilada buuraha
Astaamaha ugu waaweyn ee aan ka leenahay cimilada Isbaanishka, waxay ka qeyb galeysaa astaamaha juquraafi ahaaneed ee waddankeenna taas oo ka dhigeysa in jawiga uusan gebi ahaanba isku mid ahayn. Waxaan ka tagi karnaa meelaha heerkulkoodu yahay ku dhowaad 15 digrii, halka kuwa kale ay dhaafaan 40 darajo xagaaga. Waxaa la mid ah roobka. Waxaan ka tagi karnaa meelaha ay celcelis ahaan roobku sanadkii ka di'iyo qiimahoodu ka badan yahay 2500 mm, halka kuwa kalena ay ka jiraan cimilo badda cidla ah oo aan ka badnayn 200 mm sanadkii.
In kasta oo aan leenahay aagag kala duwan oo leh astaamo kala duwan, haddana waxaan ka heli karnaa astaamo guud guud ahaan cimilada Isbaanishka. Aan aragno waxa astaamahan oo dhami yihiin:
Cabbirka kuleylka ee jira inta uugu kulul uguna qabow badan wuxuu aad uga weyn yahay gudaha bartamaha plateau marka loo eego meelaha sida jasiiradaha Canary. Intii aan ku dhex jirnay plateau-dhexe waan heli karnaa qiyaasta kuleylka ee 20 digrii, jasiiradaha waxaan ka helaynaa kala duwanaansho kaliya 5 darajo.
Qiyamka heerkulka ayaa ka soo degaya galbeedka illaa bariga gudaha jasiiradda.
Qaybta woqooyi ee plateau-dhexe waxay leedahay xoogaa ka hooseeya celcelis ahaan heer kulka koonfurta.
Bisha ugu heerkulka ugu hooseeya jasiiraddiisa oo dhan badanaa waa Janaayo. Dhanka kale, bisha leh heerkulka ugu sarreeya waa Ogosto.
Marka laga hadlayo heerkulka biyaha, badda Mediterranean waxaan haysannaa celcelis ahaan 15-18 halka badda Cantabrian ay xoogaa ka hooseyso.
Cimilada Isbaanishka: noocyada
Waxaan arki doonnaa cimilada ugu waaweyn Spain ee jira: inta badan waxaan leenahay badda dhexe, badweynta, buuraleyda iyo buuraha.
Tani waa nooca ugu badan ee cimilada Isbaanishka maxaa yeelay waxay ku fidsantahay dhamaan xeebta badda dhexe, gudaha jasiiradda iyo jasiiradaha Balearic. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira faraqyo fara badan oo u dhexeeya gobollada qaarkood iyo kuwa kale, taas oo keeneysa saddex qaybood: badda Mediterranean-ka caadiga ah, badda dhexe ee Qaaradda iyo badda qalalan ee Mediterranean.
Laakiin ka hor intaanan ka hadlin qeybahaas, bal aan marka hore eegno astaamaha guud ee cimilada Mediterranean: Cimilada badda dhexe waa nooc cimilo dhexdhexaad ah. Waxaa lagu gartaa xilliga qaboobaha iyo kuwa qabow, xagaaga oo qalalan ama kulul ama kuleyl ah, iyo heerkullo isbedbeddelaya iyo roobab dayrta iyo gu'ga.
Waxaan hadda dooneynaa inaan falanqeyno mid kasta oo ka mid ah noocyada cimilada Mediterranean-ka ee waddankeenna:
Caadiga Badda Dhexe: Tani waa cimilada Mediterranean sida oo kale. Waxay ka kooban tahay qayb ballaaran oo ka mid ah xeebta isla magaca ah, qaar ka mid ah dhulka gudaha ah, Ceuta, Melilla iyo Jasiiradaha Balearic. Xilliga kuleylaha waa kuleyl iyo qalalan, heerkulkiisuna ka sareeyo 22 ° C. Taas bedelkeeda, jiilaalka waa mid qoyan oo roob leh heerkul dhexdhexaad ah. Isbaanishka, qaabkani waa ka duwan yahay, maxaa yeelay xeebta waxaa ilaaliya plateau Castilian waxayna u jeeddaa bariga. Sidaa darteed, dayrta iyo gu’ga ayaa hela roobab ka badan kuwa xilliga qabowga.
Mediterranean-ka Qaaradaha Sida magacu tilmaamayo, waxay leedahay astaamo qaarkood cimilo qaaradeed. Waa goob leh cimilo caadi ah badda Mediterranean-ka laakiin ka fog badda, sida bartamaha plateau ee Spain, Ebro depression, gudaha Catalonia iyo waqooyiga-bari ee Andalusia. Jiilaalku waa dheer yahay oo qabow, xagaagu waa gaaban yahay oo waa kulul yahay, iyo kala duwanaanshaha heerkulka u dhexeeya maalin iyo habeen waa mid weyn. Waxay haysaa xaaladaha roobka ee cimilada badda Mediterranean, laakiin waxay leedahay astaamaha heerkulka ugu daran ee dabeecadda qaaradda. Fogaanta badda awgeed, cimiladu waa ka qalalan tahay sidii caadiga ahayd.
Qalalan Mediterranean: Waa jawi ku meel gaadh ah oo u dhexeeya badda dhexe iyo lamadegaanka. Heerkulku waa ka sareeyaa, jiilaalku waa ka diirran yahay, celcelis ahaan xagaaga in ka badan 25 ° C, heerkulka ugu sarreeya ee aagguna aad buu u sarreeyaa, xitaa wuxuu ka sarreeyaa 45 ° C. Roobabku way hooseeyaan, waxay ku urursan yihiin deyrta iyo guga. Cimiladan ayaa ah nooc ka mid ah cimilada kuleylka ah ee kuleylka ah iyo cimilada kulul ee uumiga ah. Isbaanishka, waa wakiil caadi ah Murcia, Alicante iyo Almería.
Cimilada badweynta ama Atlantikada waxaa lagu gartaa roobab fara badan, kuwaas oo si joogto ah loo qaybiyo sanadka oo dhan. Isbaanishka, cimiladan waxay ku fidsantahay waqooyiga iyo waqooyi-galbeed, laga soo bilaabo Pyrenees ilaa Galicia. Roob-sannadeedka badanaa wuxuu ka sarreeyaa 1000 mm, markaa muuqaalku aad buu cagaar u yahay. Heerkulka xilliga qaboobaha waa qiyaastii 12 ° C-15 ° C, xilliga kulaylahana waa qiyaastii 20 ° C-25 ° C. Tusaale magaalo leh cimilada noocan ah waa San Sebastián, Vigo, Oviedo, Santander, iwm. Gaar ahaan koonfurta Galicia, astaamaha qoyaanka ee magaalooyinka xeebta waxay uga sii darayaan heerkulka ugu yar iyo kan ugu sarreeya.
Cimilada kuleylka ah waxay ku badan tahay gobollada dhexdhexaadka ah ee ku dhow dhulka kuleylaha, waxayna ku dhacdaa oo keliya Jasiiradaha Canary ee Isbaanishka.
U dhawaanshaha Tropic of Cancer iyo xeebta Afrika ee oomanaha ah, jasiiradaha Canary waxay leeyihiin cimilo gebi ahaanba qaas ah. Ku Heerkulka waa diiran sanadka oo dhan, celcelis ahaan inta udhaxeysa 22 ° C iyo 28 ° C. Roobabku waxay urursan yihiin xilliga jiilaalka, laakiin way ku kala duwan yihiin gobollada ilaa gobol kale wayna sii weynaan karaan ama ka hooseeyaan. Sidaa darteed, cimilada ku-meel-gaadhka ah ee Jasiiradaha Canary qaar ka mid ah cimilada-hoosaadka ayaa lagu kala sooci karaa.
Cimilada Isbaanishka: cimilada buuraha
Cimilada buuraleyda waxay u dhigantaa nidaamka buuraha weyn: Pyrenees, Nidaamka Dhexe, Nidaamka Iberiyaanka, kala duwanaanta buurta Penibetic-ka iyo buuraha Cantabrian. Waa qabow aad u daran xilliga qaboobaha, xagaagana waa qabow.
Waxay ku dhacdaa aagagga ka sarreeya 1000 m heerka badda. Heerkulku waa qiyaastii 0 ° C xilliga qaboobaha mana dhaafo 20 ° C xagaaga. Roobabku waa kuwo aad u tiro badan, guud ahaan qaab baraf kolba inta dhererku sii kordhayo.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto cimilada Spain iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Cimilada » Cimilada Isbaanishka